Ụmụntakịrị anaghị adị ọnụ ahịa obere ihe mgbe niile - Ahụike uche 2022
Ụmụntakịrị anaghị adị ọnụ ahịa obere ihe mgbe niile
Ịkekọrịta bụ omume ọma ọtụtụ ndị nne na nna na-agbalịsi ike ịkụnye n'ime ụmụ ha, ma nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya sitere na British Psychological Society egosila na ọ bụghị ụmụaka niile n'ụlọ akwụkwọ nwere otu mkpali n'azụ àgwà omume ha. Maka ụfọdụ, ikere òkè bụ ndọtị ebumpụta ụwa nke mmetụta ọmịiko, ebe ndị ọzọ mkpebi nke ikere òkè bụ nkwanye ùgwù maka ọnọdụ omume onye ọzọ na-akpali.
Antonio Zuffiano na ndị otu ya si na Mahadum Toronto malitere ịchọta ihe na-akpali mmasị anyị ikere òkè. A na-ejikọtakarị omume ahụ na ndị nwere obiọma na ndị nwere ọmịiko, ma nchọpụta egosiwo na ọbụna ndị na-enweghị àgwà ndị a ka nwere ike ịkpa àgwà ọma. Iji chọta mgbọrọgwụ nke ịkekọrịta, ndị otu ahụ nyochara omume n'oge mmalite mbụ: nwata. N'ime ọmụmụ ihe ahụ, a gwara ìgwè abụọ, otu n'ime ụmụaka dị afọ 7 na nke ọzọ nke dị afọ 15, ka ha sonye n'ihe omume a maara dị ka "egwuregwu ọchịchị aka ike," akwụkwọ akụkọ ahụ kọrọ.
N'egwuregwu ahụ, e nyere ụmụaka mkpụrụ ego chọkọleti isii. A kọwaziri ha akụkọ gbasara ụmụaka a na-eche n'echiche bụ ndị ọgbọ na okike yiri nke ahụ - akụkụ nke egwuregwu ahụ e chepụtara iji gosipụta àgwà ụmụaka ndị a mebere. Dị ka ihe atụ, e gosiri ụmụaka ndị nọ n'akụkọ ndị ahụ dị ka ndị na-ekpe ikpe ziri ezi, ndị na-emekọ ihe ọnụ, ndị na-emekọ ihe ọnụ, ma ọ bụ ndị na-adịghị eme ihe ike n'ebe ndị ọzọ nọ. E nyekwara ụmụntakịrị aka na ọmụmụ ihe a akwụkwọ ajụjụ iji tụọ ma ikike inwe mmetụta ọmịiko n'ozuzu ha na oke nkwanye ùgwù ha nwere n'ebe ụmụaka a na-eche echiche. A gwaziri ha na ha nwere ike họrọ ma hà chọrọ ịkọrọ ụmụntakịrị ndị ọzọ na-eche echiche ka mkpụrụ ego ha kerịta ma ọ bụ na ha agaghị eso.
Nsonaazụ gosiri na ụmụaka ndị na-enwechaghị ọmịiko na-enwekarị ike ịkekọrịta mkpụrụ ego ọla edo ha na ụmụaka ndị na-eche echiche mgbe ha gosipụtara nkwanye ùgwù maka nhọrọ omume ha.
Dị ka Zuffiano si kwuo, "nchọpụta ndị dị ugbu a na-egosi na mmetụta pụrụ iche, nke ziri ezi nke ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù nwere ike kwụọ ụgwọ maka enweghị ọmịiko mgbe ị na-ekerịta ihe onwunwe."
Akọwara ikere òkè dị ka omume ime mmụọ, ma ọ bụ omume na-erite uru na onye ọzọ na-enweghị uru onwe ya. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị evolushọn kwenyere na ọ dị mkpa maka evolushọn nke mmadụ nke oge a nakwa na ndị na-enwechaghị mmasị ịkọrọ ndị agbata obi nwụrụ n'ihi nhọrọ okike.
Ka ụmụ mmadụ malitere ịghọ ihe dị mgbagwoju anya, anyị bịara guzobe obodo. (Ndị mmadụ na-arụ ọrụ kasị mma site ná nkwado nke ndị òtù ha.) Mgbe ahụ, ụmụ mmadụ tolitere ma ghọọkwuo “otu echiche,” ka Psychology Today kọrọ. N’ihi ya, ndị na-enweghị ike inye aka n’otu obodo enweghị ike ịnọrọ ya wee ghara ịdị ndụ ma bufee mkpụrụ ndụ ihe nketa ha.
Ya mere, ọ bụ ezie na ọtụtụ nwere ike inwe ikike dị mkpa a nke ikere òkè, ihe mkpali dị n'azụ ya dị iche n'etiti onye ọ bụla.